Tattoos of the Hand of Fatima or Hamsa: midika, ohatra ary maro hafa! | Ny fanaovana tatoazy
Tattoos of the Hand of Fatima or Hamsa, dikany sy toetra miafina
Maria Jose Roldan | | Tatoazy zavatra sy zavatra, Tatoazy ara-pinoana
Mandritra ny Ny fanaovana tatoazy efa niresaka momba izany isika ny Tanan'i Fatima na Hamsa, hitanay fa mety ny manokana lahatsoratra be dia be amin'ity karazana tatoazy ity. Ny tatoazy izay, etsy ankilany, dia nalaza tamin'ny taona faramparany noho ny tandindona sy ny dikany. Andeha ho tadidintsika fa ny tatoazy an'ny tanan'i Fatima manana toetra miafina izay mahaliana azy ireo izy ireo. Tsy lazaina intsony ny endriny.
Tattoos of the Tangan of Fatima, Jamsa or Hamsa (nadika ho dimy amin'ny Arabo) maneho ny iray amin'ireo singa amin'ny kolotsaina silamo fanta-daza. Araka ny lazainay sy noho ny toetrany mistika dia fitakiana lehibe eo amin'ny tontolon'ny fanaovana tatoazy izy io. Ny hamsa dia efa hatramin'ny taloha tamin'ny kolontsaina Silamo mba hanandrana hampivondrona ireo firenena ao anatin'ny ady.
1 Ny niandohana sy ny dikan'ny Tànan'i Fatima na Hamsa
2 Ny tatoazy hamsa tsara indrindra amin'ny loko
3 Miaraka amin'ny rantsan-tànana koa
5 Tandindon'ny tanana Hamsa amin'ny finoana Silamo
6 Tandindon'ny tanana Hamsa ao amin'ny Jodaisma
7 Symbolisma Hamsa tanana amin'ny Kristianisma
8 Aiza no hahazoana tatoazy tanana Fatima?
9 Sarin'ny Tattoos an'ny tananan'i Fatima (Hamsa)
Ny niandohana sy ny dikan'ny Tànan'i Fatima na Hamsa
Fa inona ilay Fiandohana, tandindona ary hevitry ny Tanan'i Fatima na Hamsa? Araka ny ho hitantsika any aoriana, dia mariky ny kolontsaina marobe izy io, ankoatry ny kolontsaina Arabo, dia hitantsika amin'ny fivavahana jiosy ihany koa izany. Ity tandindona ity dia misolo tena ny tanana misokatra izay hitan'ny maso iray. Na dia eo amin'ny sehatry ny fitaomana jiosy aza dia antsoina hoe Hamsa izy io, fa amin'ny Islamo hafa kosa dia fantatra amin'ny anarana hoe "Ny tananan'i Fatima".
Na dia mbola voasaron'ny zava-miafina aza ny fiaviany manokana, dia mbola dinihina ankehitriny ny teôria maro momba ny tena niandohan'io marika io. Amin'ny lafiny iray dia manana ny olo-masina mpiaro an'i Carthage izahay, ampiasain'ny Phencians ho mariky ny tanit andriamanitr'izy ireo. Any Mesopotamia (izay fantatsika ankehitriny hoe Iràka) dia efa naseho sahala amin'izany manintona fiarovana izay nitombo koa ny fahavokarana.
Rehefa miresaka ny tombokavatsa tanan'i Fatima dia hitantsika fa miseho amin'ny rantsan-tànana telo manitatra foana izy, ary indraindray kosa ny rantsantanana sy ny rantsantanana kely dia miolikolika. Ny maso anatiny miorina amin'ny felatanana dia Solontena hisorohana ny maso ratsy sy fialonana. Araka ny angano sasany, ny Hamsa dia solontena ihany koa mba hiarovana amin'ny fialonana, ny endrika ratsy ary ny filan'ny nofo.
Na dia toa tsy misy ifandraisany aza izy ireo, raha mijery akaiky ianao dia ho hitanao fa maro ny tatoazy Hamsa aseho eo akaikin'ny trondro sasany, izany dia satria inoana fa ny trondro koa dia marika fiarovana amin'ny maso ratsy ary manintona ny tsara vintana. Tamin'ity fomba ity no nampiarahana tamin'ny fampifangaroana ireo singa roa, fiarovana lehibe kokoa amin'ny maso ratsy.
Ny tatoazy hamsa tsara indrindra amin'ny loko
Izaho manokana dia aleoko miloko ireto tatoazy ireto. Ary izany dia noho ny endriny sy ny antsipirian'ny felatanan'i Fatima, afaka milalao loko isan-karazany ianao mba hahazoana tatoazy tena velona ary manintona ny maso. Miankina amin'ny karazana loko ampiasaina sy atambatra, afaka mahazo valiny mitovy amin'ny tatoazy karan-doha Meksikana isika.
Ary amin'ny mainty? Eny, amin'ny mainty ireo tatoazy ireo dia toa tsara ihany koa. Ary na dia tiako manokana aza izy ireo amin'ny loko, dia tsy azoko lavina fa raha ny vehivavy, raha manao tombokavatsa amin'ny tanan'i Fatima izy ireo, manao izany amin'ny loko mainty miaraka amin'ny drafitra tsara sy mitandrina, ny vokatr'izany dia ny tombokavatsa manana toetra marefo sy ara-nofo mihitsy aza. . Ary mbola miankina bebe kokoa amin'ny toerana nanaovana ny tatoazy mihitsy.
Miaraka amin'ny rantsan-tànana koa
Ny tanana hamsa dia azo aseho amin'ny fomba roa:
Miaraka amin'ny rantsan-tànana
Miaraka amin'ny rantsantanana mihidy
Voalaza fa ny endrika voalohany maneho ny hery hisorohana ny ratsyraha ity farany kosa dia mariky ny vintana.
Ny tatoazy hamsa dia tsy hoe mahagaga noho ny endriny sy ny endriny, fa izy io koa dia tohanan'ny soatoavina sy kolontsaina manankarena. Ny famantarana dia nidina avy tamin'ny fivavahana isan-karazany, anisan'izany, araka ny efa noresahintsika, ny Silamo, fa koa avy amin'ny fivavahana jiosy ary koa ny kristianisma. Ny fampiasana ny hamsa taloha indrindra dia miverina any Iràka ankoatry ny fampiasana azy ho fiarovana sy fiarovana amin'ny maso ratsy, inoana koa fa izay manana izany dia azo antoka na aiza na aiza alehany. Ity no antony voalohany sy lehibe mahatonga ny olona maro hanana tànana hamsa amin'ny pendant, fehin-tànana, kavina ary koa izao amin'ny tatoazy, mba hiaraka sy hiaro azy ireo foana amin'izay alehany.
Ho fanampin'izany, ny tanana hamsa koa dia tonta na tazonina satria manampy amin'ny fijanonana ho voaro amin'ireo olona mandefa angovo ratsy amin'ny masony noho ny, ohatra, ny fialonana na lolom-po.
Ny maso eo amin'ny tanana hamsa dia manamafy bebe kokoa ny tandindon'ny fiarovana amin'ny ratsy. Matetika ny maso dia manondro ny mason'i Horus, izay midika fa hojerena foana isika ary na aiza na aiza no afeninao, satria tsy ho afa-mandositra ny sain'ny fahatsiarovanao tena ianao.
Avy amin'ny hamsa dia fantatra koa amin'ny hoe 'khamsa' izay teny arabo izay midika hoe 'dimy' na 'rantsantanana dimy amin'ny tanana'. Mahaliana ny fomba fanekena an'io marika io amin'ny fivavahana samihafa noho ny antony samihafa. Mahagaga fa ny dikany sy ny antony rehetra dia mitovy amin'ny heviny sy dikany ihany: fiarovana sy fiarovana amin'ny hafa sy ny angovo ratsy.
Tandindon'ny tanana Hamsa amin'ny finoana Silamo
Raha manaraka ny Silamo ianao dia ho fantatrao fa afaka manao ireo rantsantanana dimy ao anatiny maneho ny andry dimy amin'ny finoana silamo. Ireto ny:
Shahâda-Iray ihany Andriamanitra ary i Muhammad dia mpitondra hafatr'Andriamanitra
Salat-Mivavaka in-5 isan'andro
Fiantrana ho an'ny mahantra zakat-da
Fifadian-kanina sy fifehezan-tena mandritra ny Ramadany
Ilay Hajj, izay mitsidika an'i Mecka farafaharatsiny, mandritra ny androm-piainany
Raha tsy izany, ity marika ity dia fantatra amin'ny anarana hoe The Hand of Fatima, ho fahatsiarovana ny zanakavavin'i Muhammad Fatima Zahra.
Tandindon'ny tanana Hamsa ao amin'ny Jodaisma
Raha avy amin'ny fianakaviana jiosy ianao dia mino ny hamsa fa tandindon'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'izay rehetra misy eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ny rantsan-tànana dimy amin'ity tandindona ity dia ampiasaina hampahatsiahivana ilay mpitondra tatoazy hampiasa ny fahatsapana dimy rehetra hiderany an'Andriamanitra. Ny jiosy sasany dia mino koa fa ny rantsan-tànana dimy dia maneho ireo boky dimy ao amin'ny Torah. Izy io koa dia fantatra amin'ny tanan'i Miriam, zokin'i Mosesy.
Symbolisma Hamsa tanana amin'ny Kristianisma
Raha resaka Kristianisma dia misy loharanom-baovao sasany milaza fa ny tanana hamsa dia tanan'i Maria Virjiny ary maneho ny maha-vehivavy, ny hery ary ny tanjaka. Imbetsaka, ny mariky ny trondro kristiana dia ampidirina miaraka amin'ity endrika ity ho toy ny fisaronan'ny maso trondro (Ichthys). Heverina ho tandindon'i Kristy izy io. Amin'ny kolontsaina sasany, ny trondro dia mino koa fa tsy voan'ny maso ratsy.
Tsy maninona izay kolotsaina anananao, inona ny fivavahanao na inona ny zavatra inoanao, ny zava-dehibe dia raha manao tombokavatsa ny tananao hamsa ianao dia fantatrao fa ho anao dia misy dikany izany ary tsy isalasalana fa hataonao izany tatoazy mirehareha be. Ny harena, fiarovana, fiarovana ary fianakaviana no dikany lehibe indrindra amin'ity tatoazy tsara tarehy itiavan'ny olona maro ity.
Aiza no hahazoana tatoazy tanana Fatima?
Raha ny faritra iza amin'ny vatana no mahaliana kokoa ny mahazo tatoazy amin'ny tanan'i Fatima na HamsaRaha jerentsika ny galeraky ny sary etsy ambany, dia ho hitanao fa ny ankamaroan'ny ankamaroany dia misafidy ny hanao izany any aoriana, tendany na amin'ny iray amin'ireo sisin'ny tratra. Eny, misy ny olona sahy manao tombokavatsa azy amin'ny tanany, fa tsara kokoa ny iray amin'ireo tranonkala voalaza etsy ambony.
Tokony hotadidintsika fa tatoazy izay tsy maintsy manana salantsalany na habe lehibe mihitsy aza mba hahafahany mankamamy mora kokoa ny pitsopitsony rehetra. Raha tsy izany dia very ny majika sasany. Mahaliana ve ny mampifangaro azy amin'ny singa hafa? Eny, na dia amin'ny tranga hafa aza dia matetika aho no mamporisika ny fampifangaroana ny famolavolana lehibe amin'ireo singa hafa, amin'ity tranga ity, ireo tatoazy ireo dia tanteraka na dia vita irery aza.
Ok izao Tokony hotadidintsika fa ny tatoazy amin'ny tanan'i Fatima dia mihoatra lavitra noho ny tanana tsotra misy rantsan-tànana telo ary ny roa hafa miforitra.. Araka ny efa noresahintsika teo amin'ireo teboka teo aloha, ireo karazana singa hafa toy ny maso anatiny dia tokony ampidirina ary ny trondro kely koa dia hanome fikitika kokoa ny tatoazy. Raha tsy misy resaka lavitra dia avelanay anao ny galeran'ny tombokavatsa misy tànan'i Fatima hahafahanao mahazo hevitra ho an'ny tatoazy manaraka.
Sarin'ny Tattoos an'ny tananan'i Fatima (Hamsa)
Ity ambany ity dia manana be dia be Sarin'ny tombokavatsa misy ny tanan'i Fatima hahafahanao mahazo ny hevitr'ireo faritra sy fomba azonao anaovana tombokavatsa azy:
Ho an'ny vaoavao vaovao: ny fomba fanaovana tombokavatsa amin'ny dingana mora XNUMX
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Karazana tombokavatsa » Tatoazy zavatra sy zavatra » Tattoos of the Hand of Fatima or Hamsa, dikany sy toetra miafina
Melissa rojas dia hoy izy:
Tiako ity tatoazy ity. Tiako ny dikany, ary misy dikany bebe kokoa amiko.
Valiny tamin'i Melissa Rojas
tatoazy tena tsara
monmon dia hoy izy:
Ny info dia nanampy ahy be dia be ary koa hatramin'ny androany dia efa an-tavako ianao. Misaotra!
Mamaly an'i monmon
Zulma dia hoy izy:
Salama, tiako ny tombokavatsa, ohatrinona ny vidiny mihoatra ny kely?
Valiny tamin'i Zulma
Gerald dia hoy izy:
Tsy haiko raha mbola tsy vitanao izany, fa angataho ary mitentina mihoatra ny 60 dolara ny vidiny, nefa miankina amin'ny faritra ihany koa izany (firenena avy aiza ianao)
Valiny tamin'i Gerald
Misy olona afaka milaza amiko ve ny dikan'ity tatoazy ity fa ny maso dia tomany
Manana fanontaniana izay mameno fahalianana te hahafanta-javatra aho, efa nikaroka betsaka momba an'ity tatoazy ity aho, fa ny endrika amam-behivavy no jerena fotsiny, azon'ny lehilahy atao ve izany? Te-hanao an'io aho, saingy tsapako fa tatoazy vehivavy kokoa io ...
Nela zavala dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara manome voninahitra ny sary. Famaritana tsara sy famakafakana ny tandindona mitovy amin'ny iray manontolo sy ireo singa mandrafitra ny Tanan'i Fatima na Hamsa ary ny fomba fiasa avy amin'ny fivavahana samihafa. Rehefa avy namaky sy nahatakatra ny dikany aho izao dia nahaliana ahy ny nanao tatoazy toy izany. Misaotra
Valiny tamin'i Nela Zavala
RealCastle.! dia hoy izy:
Tatoazy tena tsara izy io satria ny tantarany dia misy zavatra sy dikany betsaka ho an'ny olona tsirairay manana azy, faly aho manana sombina mahafinaritra toy izany
Valiny amin'ny RealCastle.!
Tatoazy manafintohina: avelao hisidina ny eritreritrao
Tatoazy miafina ho an'ny vehivavy: ny tsiambaratelo izay ho fantatrao ihany